theZOMI: Burma News International - May 7, 2013
Burma News International - May 7, 2013
One of the aspects of the upcoming census in 2014 that will more or less keep the non-Burman leaders’ adrenaline flowing less thanayear from now is the question: How miner are we population-wise?
Burma army torches Shan rebel base
On3May,aunit of Burma Army while searching for their men inside the Restoration Council of Shan State / Shan State Army (RCSS/SSA) base, torched it to ashes next day, resulting in anger by Shan troops under the command of Task Force 701 based in the Nam Mao (Shweli) valley region, according to local news sources.
Burmese troops sneak into UWSA area
A Burma Army patrol had recently trespassed on the United Wa State Army (UWSA) controlled area in Eastern Shan State, according to the local news sources.
While the Myanmar army has continued fierce military offensives in Shan State, its troops have been guilty of rape and conscripting women as porters at gunpoint, according toareport released by the Palaung Women's Organization (PWO) on May 6.
Building-Markets-logoBuilding Markets,aNew York-based NGO, has openedaYangon branch with the aim of connecting locally owned businesses with resources and training.
A storm caused serious damage to buildings in4internally displaced persons (IDPs) camps in Mai Ja Yang, the second largest city controlled by the Kachin Independence Organization (KIO) in Kachin state, Burma. Shelters, latrines, meeting halls, and one church andaschool were affected by the heavy winds that came in the afternoon and lasted about 30 minutes on last Friday.
Rohingya farmers are suffering from water shortages for their summer paddy cultivation, said local elder who spoke with Kaladanpress on condition of anonymity. The farmers are dependent on growing rice in the summer to survive the proceeding rainy season.
ရခိုင် အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ၆ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်အကျင့်ပျက်မှုကို ဦးစားပေးဖြေရှင်းမည်ဟု KNPP ပြော
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် လူမှုရေးပျက်ပြားနေတာတွေကို ပြုပြင်ဖို့အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်သွား မယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီကနေပြီး ၁၂ ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မဒေးကျွန်း (လက်ရှိ အခေါ် မြဒေးကျွန်း) မှ ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင် ၁၀ ဦးကို ယမန်နေ့က ကျောက်ဖြူ မြို့နယ် တရားရုံးတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ရုံးတင် တရားစွဲဆိုရာ ကျွန်းပေါ်မှ ရွာသား ၆၀၀ ခန့်သည် စက်လှေများဖြင့် လိုက်ပါလာပြီး ကျောက်ဖြူမြို့နယ် တရားရုံးထိ ချီတက်ပြီး သူတို့အား လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဖမ်းထားသည့် လူငယ်များ ပြန်လွှတ်ပေးရန် မွန်လူငယ်ဖိုရမ် တောင်းဆို
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ ရိုးဂိုးကျေးရွာတွင် သင်္ကြန်ကာလက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မွန်လူငယ်များနှင့် ရဲဝန်ထမ်း ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးထားသည့် လူငယ်များကို ခြွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးရန် မွန်လူငယ်ဖိုရမ်က တောင်းဆိုလိုက်သည်။
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် မြေယာဧကအမြောက်အများလဲလှယ်မည့် အစိုးရအစီအစဉ် ကယားလူထု လက်မခံ
သမ္မတရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဆုချီးမြှင့်မှုခံရသူ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးမြတ်သူဟာ ကယားပြည်နယ်အတွင်း ပြောင်းသီးနှံစိုက် ဒေသခံများကို နည်းပညာပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ စိုက်ပျိုးဖို့ အစိုးရ၀န်ကြီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး စိုက်ပျိုးမြေ ဧက ၅၀၀ (သို့) ၁၀၀၀ တောင်း ခံလာတဲ့အပေါ် ဒေသခံများက လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေး ရုပ်သံ အစီအစဉ်အဖြစ် ပြည်တွင်း ရုပ်သံလိုင်းများတွင် ပြသနိုင်ရန် “လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ” အစီအစဉ်ကို မေလ ၇ ရက်တွင် စတင်ရိုက်ကူးနေပြီ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ညီနောင်တိုင်းရင်းသားများ စုပေါင်းပါတီသစ် ထူထောင်ဖို့စီစဉ်
လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ညီနောင်တိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ချုပ် (NBF) က ပါတီသစ်တစ်ခု စုပေါင်းထူထောင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း အဖွဲ့ဝင်ပါတီဖြစ်သည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ကျားဖြူပါတီ) မှ တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးစောသန်းမြင့်က ပြောကြားလိုက်သည်။
NLD ပါတီဝင်ဟောင်းဖြင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသော ကယားလူမျိုးစုံ ဒီမိုကရေစီပါတီသစ် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၏ ပါတီဝင်ဟောင်းများဖြင့် အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားသော ကယားလူမျိုးစုံ ဒီမိုကရေစီပါတီသည် တရားဝင်ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း ပါတီ၏ ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ စောဒယ်နရယ်က ပြောသည်။
တအာင်း (ပလောင်) ကျောင်းသား လူငယ် အဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ် လာရှိုးမြို့ သို့ ရောက်ရှိ နေသော ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့မှ မင်းကိုနိုင်တို့ အဖွဲ့အား ၄င်းတို့ ဒေသ၌ ရင်ဆိုင် နေရသော လူမှု ဒုက္ခများအား ယမန်နေ့က တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု တအာင်း လူငယ်နှင့် ကျောင်းသား ကွန်ယက်ဝင် တဦး ဖြစ်သူ မိုင်းကံဟောင်က ဆိုပါသည်။
အစိုးရရာဇသံကို ငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ များက စုပေါင်းဆန့်ကျင်
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် ဟပ်ကြီး ရေကာတာကို အကြောင်းပြပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားသော ကရင်လက်နက်ကိုင် များအားစစ်ဆင် ပါက စုပေါင်း ခုခံ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့ မေလ (၆) ရက်နေ့၌ ကျင်းပ ခဲ့သော ပြည်တွင်း သတင်းထောက် များအား ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံ ပွဲတွင် ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့များက ထုတ်ပြန် သွားပါသည်။